Ubani osiza wena uma kwenzeka umthetho wobulelesi? | Law & More BV
Kunezimo eziningi lapho umthetho wobulelesi ubamba iqhaza ezimpilweni zethu. Kungakho sivame ukuhlangana nakho ngengozi. Isibonelo, ungacabanga ngesimo lapho ubuphuze khona kakhulu futhi wanquma ukushayela. Uma uboshwa ngemuva kokuhlolwa ngotshwala unenkinga. Ngaleso simo ungahlawuliswa noma uthole amasamanisi.
NGESIDINGO SOMLENGISI WAMANDLA?
Kunezimo eziningi lapho umthetho wobulelesi ubamba iqhaza ezimpilweni zethu. Kungakho sivame ukuhlangana nakho ngengozi. Isibonelo, ungacabanga ngesimo lapho ubuphuze khona kakhulu futhi wanquma ukushayela. Uma uboshwa ngemuva kokuhlolwa ngotshwala unenkinga. Ngaleso simo ungahlawuliswa noma uthole amasamanisi. Esinye isimo esijwayelekile ukuthi ngenxa yokungazi noma ukungakhathaleli, izikhwama zabagibeli ziphethe izinto ezingavunyelwe ezithathwa eholidini, empahleni noma ezikhwameni ezikhonjiswe ngokungafanele. Kungakhathalekile ukuthi yisiphi isizathu, imiphumela yalezi zenzo ingaba mikhulu, futhi inhlawulo yobugebengu ingakhuphuka kuze kube inani le-EUR 8,200.
> Izisulu zomthetho wobugebengu
> Umthetho wobulelesi wethrafikhi
> Umthetho Wobumbano Wobugebengu
Njengosomabhizinisi noma umqondisi wenkampani ungahlangana futhi nomthetho wobugebengu ngenxa yesikhundla sebhizinisi lakho. Lokhu kungenzeka, ngemuva kokuqinisekiswa kweziphathimandla ezinekhono, inkampani yakho isolwa ngokukhohlisa noma ukuthengiselana okungajwayelekile. Futhi, ukubamba iqhaza ezweni lamabhizinisi kungaholela ekuphuleni ngokwezomnotho noma ukwephulwa komthetho wemvelo ongasebenza ebhizinisini lakho. Izenzo ezinjalo zingaba nemiphumela emibi enkampanini yakho futhi ziholele enhlawulweni ephezulu kakhulu. Ngabe uzithola ekulesi simo noma udinga ulwazi olwengeziwe? Sicela ungangabazi ukuxhumana nabameli bobugebengu be Law & More.
Shayela ku +31 (0) 40 369 06 80
Ubuchwepheshe babameli bezomthetho wobulelesi Law & More
Umthetho wobulelesi wethrafikhi
Usolwa ngokushayela ngaphansi kwethonya lotshwala noma izidakamizwa? Cela usizo lwethu lwezomthetho.
Ngabe usolwa ngokukhwabanisa? Singakucebisa
Umthetho wobumbano wobumbano
Ngabe ubeka engcupheni izindaba zomthetho wobumbano wobumbano? Singakusiza
Ngabe uhlanjalaziwe? Qala inqubo esemthethweni
kwenze ukuthi ingabizi ngami
inkampani encane. Ngizoqinisa
batusa Law & More
kunoma iyiphi inkampani eku-
Izisulu zomthetho wobugebengu
Kungenzeka futhi ukuthi ubhekane nomthetho wobugebengu ovela kumbono 'wesisulu' Lezi zinsuku sithenga okuningi nge-intanethi. Imvamisa konke kuhamba kahle futhi uthola lokho okuyalile. Ngeshwa, kwesinye isikhathi kuya ngokungalungi: ukhokhe imali eningi ngezinto ezithile ezifana ngocingo noma i-laptop, kepha umthengisi akakaze alethe izimpahla futhi akazimisele ukwenza kanjalo. Ngemuva kwakho konke, uma ufuna ukwazisa ukuthi impahla yakho ikuphi, umthengisi akatholakali. Ngaleso simo ungaba yisisulu sobugebengu.
Ezimweni lapho uhlangana ngephutha nomthetho wezobugebengu, kungakuhle ukuthi uthintane nommeli onguchwepheshe lapho Law & More. Yonke imicimbi ngokwesimo somthetho wobulelesi ingaba namandla kakhulu futhi isenzo ezenzweni zobugebengu singalandelana ngokushesha. At Law & More Siyaqonda ukuthi izenzo zomthetho wobugebengu zingaba nomthelela omkhulu empilweni yakho futhi yingakho sigxile ekuxazululeni inkinga yekhasimende ngokushesha nangendlela efanele. Abameli bobugebengu at Law & More ujabule ukukunikeza ukwesekwa okusemthethweni ezindaweni zika:
• Umthetho wobulelesi wethrafikhi;
• Umthetho wobumbano wobumbano;
Njengomshayeli wemoto kufanele ugweme kusuka ekuziphatheni okuyingozi. Ukuziphatha okunjalo kuvame ukwenzeka lapho kubusela utshwala emgaqweni. Abantu bavame ukungena ngemuva kwesondo lemoto ngemuva kokuphuza kakhulu. Ngabe uboshwa ngemuva kwesheke lotshwala noma uthola inhlawulo noma amasamanisi? Lapho-ke kuwukuhlakanipha ukuthi uzinikeze kummeli onguchwepheshe. Ngemuva kwakho konke, ukushayela ngaphansi kwethonya lotshwala kujeziswa izinhlawulo ezinzima ezingagcina zifinyelele ezinyangeni ezintathu ejele noma inhlawulo ye-EUR 8,300 futhi ungathola ngisho nokumiswa kokushayela. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi ngesikhathi sokuphenywa ngemibuzo noma ngesikhathi sokuphuza utshwala imithetho iphula imithetho yamaphoyisa neziphathimandla zenkantolo. Kungenzeka futhi kube ukuthi uvivinyo lotshwala alunikezi ubufakazi obusebenzayo futhi lungaxazulula ukuqedwa. Kwezinye izimo, inhlawulo noma ukumiswa kokushayela akusebenzi. Law & More inabameli abangochwepheshe emkhakheni wezomthetho wobulelesi bomgwaqo abajabule ukukunikeza izeluleko noma ukukusiza ekuqhubekeni kwecala. Ungathola eminye imininingwane mayelana nokuziphatha okuyingozi kumigwaqo nokushayela uphuzile ngakithi iwebhusayithi yomgwaqo.
Lapho uya eNetherlands, udlula amasiko. Ngaleso sikhathi, awuvunyelwe ukuphatha izimpahla ezinqatshelwe. Uma lokho kungenjalo noma uma iziphathimandla zentela zithola impahla enqatshelwe ngenxa yokungazi noma ukunganaki, kungalandelwa unswinyo lobugebengu. Izwe odabuka kulo noma ubuzwe bakho awunawo umthelela kulokhu. Isigwebo esinokwenzeka kakhulu nesijwayelekile siyinhlawulo. Uma uthole inhlawulo futhi ungavumi, ungakuphikisa lokhu kwabakwaDutch Prosecution Service kungakapheli amasonto amabili. Uma ukhokha inhlawulo ngokushesha, wenza nesikweletu. Kungakho kubalulekile ukuthi uqale ubonisane nommeli ngesimo sakho. Ithimba lethu labameli lithola ulwazi lwesazi futhi lingakucebisa futhi likuqondise kunoma yikuphi ukuqhubeka kwecala. Ngabe udinga usizo noma uneminye imibuzo? Sicela uxhumane Law & More. Ungathola imininingwane eminingi mayelana nobungozi nemiphumela yokuthatha izimpahla ezinqatshelwe kubhulogi lethu: 'Amasiko WamaDashi'.
Umthetho Wobumbano Wobugebengu
Namuhla, izinkampani ziya ngokuya zibhekana nomthetho wobugebengu. Isibonelo, kungenzeka ukuthi inkampani yakho isolwe ngokwenza imbuyiselo engalungile yentela noma yephula imithethonqubo yezemvelo. Izindaba ezinjalo ziyinkimbinkimbi futhi zingaholela emiphumeleni efinyelela kude, yomuntu uqobo neyebhizinisi. Kulolu hlobo lwesimo, kubalulekile ukubonana nommeli ngokushesha. Ummeli onguchwepheshe ngeke nje aveze imisebenzi yakho, njengokuzibophezela ekunikezeni imininingwane kwabaphethelo, kodwa futhi aqinisekise ukuthi amalungelo wena (njengenkampani) onawo, njengelungelo lokuhlala uthule, awephulwa. Ngabe ubhekene nomthetho wobugebengu njengenkampani futhi ufuna izeluleko noma usizo lwezomthetho esimweni sakho? Ungaqiniseka Law & More. Ochwepheshe bethu banendlela yobungcweti futhi bazi ukuthi bangakusiza kanjani ngokuqhubekayo.
Ngaphansi kwezimo ezithile ungazizwa unenkani, ngokwesibonelo uma uthenga izimpahla ku-inthanethi, ukhokha imali eningi ngakho futhi ungakaze uzithole, ngaphandle kwezimpawu zomthetho zobugebengu. Ukuze ukwazi ukusho ukuthi umkhonyovu uyisigebengu ngomqondo osemthethweni, kufanele kube khona amanga noma amanga aqhamuka nomthengisi ukuze athengise okuthile. Umkhonyovu uchazwa ngokusemthethweni njengohamba omunye umuntu ukuthi alethe imali nezimpahla, ngaphandle kwenhloso yokuletha noma yini ukubuyisa. Ufuna ukwazi ukuthi yini esingakwenzela yona? Xhumana nabameli bethu. Law & MoreAbameli bakahulumeni banendlela yomuntu siqu futhi bangahlola isimo sakho kanye nezinketho zakho.